कोरोनाको पिसिआर परिक्षणलाई लिएर भर्खरै आयो अत्यन्तै खुसिको खबर ! – Dainik Sangalo
September 20, 2020 506
कोरोनाको पिसिआर परिक्षणलाई लिएर भर्खरै आयो अत्यन्तै खुसिको खबर ! चितवन । चितवन मेडिकल कलेजले दुई घण्टामा नै कोरोनाको पिसिआर परीक्षणको नतिजा दिन थालेको छ । अस्पतालले र्यापिड एन्टिजेन टेष्ट मार्फत छिटो नतिजा दिन आजदेखि सो सेवा शुरुआत गरेको हो । यसका लागि तीन हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ । कलेजको प्रयोगशालामा गएको एक महिनामा पाँच हजार २९२ जनाको कोरोनाको पिसिआर परीक्षण गरेको छ । तीमध्ये ९५३ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो । *** भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***
Prevअनशनरत डा. केसीलाई ‘जबर्जस्ती’ प्रतिष्ठानमा ल्याइयो
Nextमहान बुहारी – बूढा ससुरा यस्तो हुदा पनि साथ छो’डिनन, परिवारले छोड्यो तर बुहारीले यसरि स्याहार्दै,